Agoosto | 2011 | WEEJIDOW | Baal 2
Archive for Agoosto, 2011
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xarun ka Furatay Meesha ugu dhibaatada badnayd ee lagu Wax yeelayn jiray barakacayaasha soo gaaray Muqdisho..
Agoosto 28, 2011
G/sare Muun-gaab ayaa sheegay in maanta ay ka furteen saldhigga galbeed ee ee degmadaas laan, taasoo uu sheegay inay isla goobta ku xukumi doonto askarigii las oo qabto isagoo dhac geysanaya, isla goobtana lagula fulin doono xukunka.
“Dalku wuxuu ku jiraa xaalad deg-deg ah, cid walba oo dhibaato geytana waxaa lagu fulin doonaan xukun dil ah, waayo waa in shacabka la badbaadiyo,” ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda ciidammada DKMG ah.
Kulankan ammaanka looga hadlayay ee maanta ka dhacay degmada Dharkeynely ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha degmadaas Macallin Cabdulle Cali Hilowle iyo taliyaha saldhigga galbeed G/lle C/llaahi Siyaad oo labaduba qiray inay ka jirto degmadaas ammaan-darro xooggan.
“Ciidamo badan ayaa soo gaaray degmada, kuwaasoo dadka dhibaato badan ku haya, markii aan wax ka qaba waynay waxaan go’aansannay inaan u gudbinno DKMG ah gaar ahaan maxkamadda ciidammada,” ayuu yiri Macallin C/lle Hilowle.
Sidoo kale, guddoomiyuhu wuxuu sheegay in kooxaha hubeysan ay ka geystaan degmada falal isugu jira dhac, kufsi, dil iyo boob hantiyeed, isagoo sheegay inay ka mahadcelinayaan maxkamadda ciidamada oo hadda kaddib ka howlgashaysa degmada.
Taliyaha saldhigga booliiska ee galbeedka Xamar G/lle C/llaahi Siyaad oo isaguna ka hadlay goobta ayaa sheegay in kooxo fara badan oo ku labisan ciidamada dowladda ay dhibaatooyin ka geystaan degmadaas, isagoo sheegay in saldhigga uusan awood u lahayn inuu wax ka qabto kooxahaas.
Xildhibaan Ibaraahim (Garabey) oo ku geeriyooday Muqdisho
Agoosto 26, 2011
Allaah Ha u naxariistee xildhibaan ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya ayaa saakay ku geeriyooday Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Saakay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ku geeriyooday Xildhibaan ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya oo lagu magacaabo Ibaarhim Garabeey kaasi oo la sheegay in maalmihii dambe u xanuunsanaa.
Marxuumka waxa uu ku geeriyooday hoygiisa oo ku yaalla Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Marxuum Ibaraahim waxa uu horey u ahaan jirey sarkaal ciidan waxa uuna u dhashey qowmiyada DigilMirifle.
Wararka ayaa waxa ay inoo sheegayaan in xildhibaanka saaka lagu aasey Magaalada Muqdisho, iyadoo la tilmaamay in aaskiisa ay ka qeyb qaadanayaan Mas’uul ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya iyo xildhibaano katirsan baarlamaaan KMG.
War Deg Deg AH:R/wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo goor u ambabaxay Garoowe
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo R/wasaaraha Soomaaliya ayaa goor u dhow u anbabaxay magaalada Garoowe eexarunta maamulka Puntland.
R/wasaraaha ayaa waxaa safarkiisa ku wehliya wasiirka Caafimaadka, wasiirka Waxbaashada, wasiiru dowlaha Gaashaandhiga iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
R/wasaare Cabdi Wali Maxamed Cali oo inta uusan ka anbabixin magaalada Muqdisho Garoonka Diyaaradaha kula hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in booqashada ay Garoowe ku tagayaan ay ugu horeyn doonayaan in ay halkaasi kulamo kula yeeshaan maamulka halkaasi ka arrimiyo.
Waxa uu xusay R/wasaaraha in sidoo kale ay gogol xaar u tahay booqashooda Garoowe socdaal uu dhawaan halkaasi ku tagai doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya si loo anba qaado iskaashi ay wada yeeshaan dhammaan masuuliyiinta Soomaaliyeed.
Waxaana la filyaa in goor dhow ay gaaran R/wasaaraha iyo wafdiga uu hoggaaminayo magaalada Garoowe ee xarunta Puntland iyadoo lagu wado in halkaasi ay si diiran ugu soo dhaweeyaan masuuliyiinta maamulka Puntlad oo uu hoggaaminayo madaxweyne Faroole.
Shirkii Midowga Africa Oo Soomaaliya Laagu Yaboohey $351-Melyan
Shirkii Midowga Afica uga socday magaalada Adis Ababa ee xarunta Ethiopia ayaa lasoo afjaray xalay gelinkii hore, waxaana laga soo saaray yabooh lacageed oo Soomalaiya loo sameeyey.
Lacagta Soomaaliya loogu yaboohay ayaa caddada guud gaaraysa ilaa 351-melyan oo dollarka Maraykanka ah, waxaana inteeda badan ku yaboohay Bangiga horumarinta qaaradda Africa.
Shirka oo socday muddo hal maalin ah kama soo qayb galin hagaamiyeyaashii loo baahnaa, waxaana jiray dalal badan oo soo dirsaday wasiirro iyo masuuliyiin kale.
Madaxda kulanka joogtay ayaa waxaa kamid ahaa Madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obiang Mbasogo oo haya xilligan Madaxtinimada Midowga Afrika, Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Meles Zenawi iyo Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweynaha Dawladda KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo kulanka khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay marayso meel aad u khatar badan isla markaana loo baahan yahay in shirka laga sameeyo yabooh lacageed oo dhab ah.
Raysal wasaaraha martida loo ahaa ee Ethiopia Meles Zanawi ayaa shirka ka sheegay in muhiimaddu tahay sidii ay qaaradda Africa xil weyn isaga saari lahayd daryeeliida dadka ku dhibaataysa macaluusha ka ka jirtay qaybo Geeska Africa oo ay Soomaaliya ugu daran tahay.
Madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obiang Mbasogo oo xilligan haya Guddoomiyeynimada Midowga Africa ayaa shaaciyey in Dawladdiisu ay gargaarka Soomaaliya ku daraysa lacag gaaraysa ilaa 2-melyan oo dollar, isaga oo dallaka kale ee Africa ugu baaqay in wax ku haboohaan.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Jean Ping ayaa shirka ka sheegay in xaaladda macaluusha ee ka taagan Soomaaliya ay u baahan tahay wax qabad dhab ah oo ka yimaada dalalka Africa, waxaana uu ku boorieyey hoggaamiyeyaasha Africa in ay gargaarka Soomaaliya si wada jir ah uga qayb qaataan.
Kuxigeenka Xafiiska Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey gabadha la yiraahdo Asha Rose Migiro ayaa tilmaamay in maalin kasta ay Soomaaliya xaaladaha abaaraha iyo macaluusha ugu geeriyoodaan ilaa 15-carruur ah taasina ay tahay masiibo aad u daran.
Ergeyga Midowga Afrika ee Soomaaliya Jerry Rowlings oo ahaa Madaxweynihii hore ee Ghana ayaa isna dhankiisa ku baaqay in sida ugu deg dega badan wax looga qabto xaaladaha macaluusha kasii daraysa ee Soomaaliya ka taagan.
Dhanka yabooha lacagta ayaa kala ahaa sidan Bangiga horumarinta Afrika 300-milyan oo dollar, Dawlada Masar 16-milyan, Dawladda Aljeeriya 10-milyan, Dawladda Equatorial Guinea 2-melyan oo dollar iyoo sidoo kale Dawladdo kale oo ay kamid tahay Koonfurta Sudan.
Lama oga sida ay kusoo xaroon doonaan lacagaha loogu yaboohay abaaraha Soomaaliya iyo xilliga ay Soomaaliya soo gaari doonaan iyadoo aanay ahayn arkii ugu horaysay ee Soomaaliya lacago loogu yabooho kuwaasi oo aan intooda abdan dhaafin madasha shirka.
Shabaabka Beledweyne Oo Xirtay Macallin Dugsi Quraan
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Al-Shabaab ee halkaasi ku sugan ay xirteen nin Macallin dugsi ah oo lagu magacaabo Macallin Cabdullaahi Warsame.
Al-Shabaab ayaa la sheegay in ninkaan ay u haystaan qori uu la fakaday wiil dhallinyaro ah, kaasoo horey uga tirsanaan jirayCiidamadooda oo ay qaraabo yihiin Macallinka, iyagoo sheegay in aysan sii deyn doonin inta ay ka helayaan qoriga ay sheeganayaan.
Macallin Cabdullaahi Warsame ayaa ah Macallin wax ka dhiga dugsi Quraan oo ku yaalla deegaanka Beergadiid oo ka tirsan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, balse safar ku joogay magaalada Beledweyne.
Qaar ka mid ah odayaasha magaalada Beledweyne ayaa ku guuleysatay isku day ay ku damacsanaayeen in lagu siidaayo Macallinka, iyagoo arrintaan ku tilmaamay in ay tahay mid xadgudub ah.
Bardaale Oo Lagu Mamnuucey Salaada Tahjudka
Al-Shabaab ee ka arrimisa degmada Berdaale ee gobolka Baay ayaa lagu soo waramayaa in ay dadka halkaasi ku dhaqan ay u diideen tukashada salaada Taajudka oo la tukada tobanka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
Cali Isaaq oo ka mid ah dadka ku dhaqan halkaasi ayaa sheegay inShabaab ay dadka u adeegsadeen awood, iyagoo albaabada u laabay laba ka mid ah masaajidda ugu waa weyn ee degmada Berdaale.
Shabaabkaoo uu horkacayay horjoogaha degmada Berdaale ayaa xalay gaari ay cod baahiyaal ku xireen dadka uga digayay tukashada salaada Taajudka, iyagoo aan sheegin sababta iyo ujeedka ay u diideen tukashada salaadaasi. Horjoogahaas ayaa intaasi raaciyay in tallaabo laga qaadayo ciddii fulin waydo amarkooda.
Wafdi ka socday Qaramada Midoobay oo booqday Garbahaarey.
Agoosto 25, 2011
Wafdi ka socday Qaramada Midoobey ayaa maanta booqday magaalada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo, halkaas oo ay kula kulmeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Wafdiga oo isugu jiray saraakiil ka tirsan WFP iyo saraakiil Qaramada Midoobey u qaabilsan dhinaca amniga ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbahaarrey, iyadoo ujeeddada safarkooda uu la xiriiray qiimeyta gegida diyaaradaha ee magaalada Garbahaarrey in ay adeegsan karaan hay’adaha samafalka iyo xaaladda dadka ku barakacay Garbahaarrey.
Xildhibaan Maxamuud Sayid Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u sheegay in kulanka ay saraakiishaasi u gudbiyeen warbixin ku saabsan dhibaatada abaaraha ee gobolka Gedo iyo sida ay hay’adaha wax uga qaban karaan, wuxuuna xildhibaanku sheegay in dhankooda ay wafdiga u ballanqaadeen gargaar loo keenayo dadka da’da ah iyo carruurta.
Xildhibaanku wuxuu tilmaamay in wafdiga ay u sheegeen in ay gargaar bini’aadannimo ka soo dejin doonaan cirka iyo dhulka, si loo caawiyo kumannaanka qof ee ay abaaruhu saameeyeen, isagoo xusay in kormeerka ay ku tageen xeryaha lagu barakacay ay ku arkeen nolosha adag ee halkaas ka jirta.
Waa wafdigii ugu horreeyay oo Qaramada Midoobey ka socda oo tago Garbahaarrey muddo sanado ah, wuxuuna safarkoodu ku soo beegmay xilli ay gobolka Gedo ka taagan tahay abaar sababtay macluul iyo gaajo.
War-Saxaafadeed Shirka Golaha Wasiirada Muqdisho, 25 August 2011
Golaha Wasiirada waxey maanta warbixin ka dhageysteen Safiirka Soomaaliya u Fadhiya Qaramada Midoobey ee Geneva Mudane Yusuf Mohamed Isma’il (Bari-Bari) oo ka warbixiyey warbixintii ay Dowladda Soomaaliya ka horjeedisay Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey ee Geneva 3dii May 2011 ee ku aadaneyd xaaladda dhabta ah ee arrimaha Xuquuqul Insaanka ee dalka. Golaha Xuquuqul Insaanka ku ammaanay dowladda Soomaaliya, isla markaana ay golaha QM dowladda Soomaaliya u soo gudbiyeen 155 tallooyin oo uu safiirku sheegay in loo baahanyahay in Dowladda Soomaaliya ay ka baaraandegaan ka dibna ay warbixin ku wajahan tallooyinkaas iyo waxa laga qaban karo loogu soo gudbiyo Golaha Xuquuqul Insaanka ugu danbeyn 2da September.
Safiirka ayaa sheegay in Golaha Xuquuqul Insaanka ay 5 jeer go’aamiyeen in Dowladda Soomaaliya laga saacidayo sidii ay hay’adaheeda u fulin lahaayeen arrimaha Xuquuqul Insaanka. Golaha Wasiiradu waxey u mahadceliyeen Safiir Bari-Bari iyo warbixintiisa.
1.	in aan marnaba la aqbali karin Isbaaro, lana amray in dhammaan Isbaarooyinka magaalada laga wada qaado. Cidii Isbaaro dhigatana la horgeeyo maxkamadda ciidamada.
3.	In guddiga ay ka soo talo bixiyaan sidii si deg-deg ah loogu furi lahaa dhammaan jidadka magaalada iyo Suuqyada sida suuqa bakaaraha.
5.	In la xoojiyo ciidamada roondooyinka ah, oo aan la oggolaan cid hub ku dhex sidata magaalada gudaheeda.
7.	In dhammaan dhismayaasha iyo goobaha dowladda aan loo oggolaan in shacabku dego, si ay hay’adaha dowladdu dib uga howlgalaan goobahaas.
Yoweri Museveni “ waa in laga saacidaa Soomaaliya sidii shabaab Duqayn cirka ah loogu gaysan lahaa…
Waxaa soo baxayay maalmihii la soo dhaafay warar sheegaya in Ciidamada Cirka Maraykanka ay ka Qeyb qaadan doonaan, duqayn cirka ah oo shabaab loogu gaysto Qeybo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan Gobolada ay ku xooganyihiin ee Kismaayo iyo Sh/Hoose.
Waxaa arintaas ka hadlay Madaxweynaha dowladda Uganda Uganda Yoweri Museveni oo soo dhaweeyay in alshabaab Duqayn Cirka ah loo gaysto.
Asaga oo ka hadlayay in Dowladiisa diyaar u tahayn in ciidamo dheeraad ah ay u dirto dalka Soomaaliya hadii Midowga Afrika uu ka dalbado, waxa uuna ugu baaqau Wadamada Reer Galbeedka in ay Duqayn ka gaysytaan Soomaaliya gaar ahaan goobaha shabaab maamulaan.
“ Waxaan Beesha caalamka ugu baaqynaa in ay Duqayn Cirka ah u gaystaan shabaab, si loo Wiiqo awoodooda dhaqaale iyo Milatari, hadii kale caalamka Halis ayay ku yihiin” ayuu yiri Madaxweyne Yoweri Museveni.
.“Ma dooneyno inaan dhibno dadka Soomaaliyeed ujeedadeenu waxa ay tahay inaan caawino dadka Soomaaliyeed, waxaan aamin sanahay in qof walba oo isku daya inuu wax dhibaateeyo uu fashilmayo” sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni.
Sidoo kale hadalkan ayaa imanaya Xili magaalada Muqdisho ay Dagaalo Qaraar ku dhexmarayaan Madaxweyne Yoweri Museveni iyo Ciidamadiisa Ugandha kuwaas oo dagaal kula jira shabaab.
Jaaliyada Masar Oo Barakacyaasha Baydhabo Ugu Deeqey 15.000 Oo Daalarka Mareykanka Ah.
Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Masar ayaa deeq lacageed oo gaareysa shan iyo toban kun oo dollar-ka Mareykanka u diray dadka ay macluusha ku haysato magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo ka mid ah gobollada ugu daran oo ay ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu saameyeen.
Guddoomiyaha guddiga dhaqaale uruurinta abaaraha ee dalka Masar Cabdiraxmaan Cilmi Hilowle ayaa sheegay in ay meel wanaagsan u mareyso dhaqaale uruurinta, ayna u sameeyeen guddi si ay dhaqaalaha u uruuriyaan, wuxuuna sheegay in waxyar kaliye u harsan tahay gurmadka loo fidinayo dadka ay macluusha ku habsatay.
Cabdiraxmaan Cilmi Hilowle ayaa sheegay in ay haatan direen lacag dhan $15,000 oo dollar ah, isagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dhaqaale uruurinta inta bisha barakeysan ee Ramadaan ka dhiman, si dadka macluusha iyo abaarta daran haysata loo badbaadiyo.
Guddoomiyaha guddiga dhaqaale uruurinta abaraha ee dalka Masar ayaa sidoo kale sheegay in lacagtani ay ku hagaajiyeen guddiga abaaraha ee ka dhisan magaalada Baydhabo lacag gaareysa 5 kun oo dollar, halka 10-ka kun kale ay ku hagaajiyeen Jamciyadda Nuur ee ka howlgasha isla magaaladaasi.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2011.